Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Africa na-alụ ọgụ COVID-19
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Africa na-anọ n’azụ Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Board of Tourism Board. Onye isi ATB ka nwalere n'oge na-adịbeghị anya maka COVID-19 ma na-alụ ọgụ iji nwetaghachi.
Onye isi oche nke Ndị njem nleta n'Africa, Maazị Cuthbert Ncube na-alụ ọgụ ugbu a na Coronavirus.
Achọpụtara onye ndu ATB dị mma n’izu gara aga na Pretoria, South Africa, mgbe ọ na-anwale ule na nkwadebe maka ụgbọ elu mba ofesi gaa Liberia.
N'ụtụtụ Tuzdee, Maazị Cuthbert zara ndị otu a na-echegbu onwe ha n'iziga ndị otu WhatsApp Group:
Ọ na-enye m ume ịmara na anyị bụ nnukwu ezinụlọ. Daalụ nke ukwuu maka ume gị dị mma. Ọ na-eme ka anyị na-aga.
Nye ndị niile nje virus a na-emetụta n'ụzọ na n'ụzọ na-enweghị isi ka anyị gbaa ha ume ile anya n'akụkụ na-enwu gbaa.
Enwere m ike ịrịọ ezigbo ndị enyi m ebumnuche anyị ịhazigharị kọntinent Africa ga-abụrịrị ihe mkpali anyị nwere ike ime ka anyị gbakọta ọnụ iji hụ otu ọhụụ? Ka njem na-amalite na ị
Mgbe awa ole na ole gachara, ọ gwara ndị isi ya na-asị:
Ezigbo ndị otu, m ka na-echekwa iche ma taa abụghị ụbọchị kachasị m mma. Obi m na-akụ afọ n’ala. Enwere m ike ịrịọ ka anyị yigharia nzukọ anyị maka izu na-abịa abịa m ga-adị mma n'oge ahụ. Mgbaghara m na-anọ nke ọma ma chebe m. Nje Virus a na ebute mbibi na mbibi.
Faouzzou Deme, onye otu si Senegal kwuru: Ekpere anyị na ọchịchọ maka mgbake ọsọ ọsọ dịnyere gị. A na-anụ ozi gị na ọ ga-enwe nkwughachi ihu ọma na ndị otu nke ATB. B BE Ike
Nkwupụta na-abịa site na narị otu narị ndị otu ATB, yana ndị ndu njem nleta n'Africa na gafere. Africa Tourism dị n'otu mgbe a bịara ịlụso nje ahụ ọgụ ma na-achọ ka Mr. Ncube gbakee ngwa ngwa.
Mazị Ncube ka etinyere aha ya n’oge na-adịghị anya Onye njem njem nlegharị anya nke mba ụwa site Network Njem Nleta Ụwa.
Mr. Ncube nwere ike ruru site na email na [email protected]
Ozi ndi ozo banyere ndi njem nleta ndi Africa, tinyere ndi otu: